Fungicide "Bravo": famaritana, torolàlana ampiasaina - Famokarana voankazo - 2019
Fungicide "Bravo": fampitahana, fomba fampiasana, fampianarana
Fungicides dia zavatra simika izay ampiasaina hiadiana amin'ny aretina azo avy amin'ny pilina sy ny fiompiana voa avy amin'ny fody maloto alohan'ny fambolena.
Misy karazana zava-mahadomelina marobe natao ho an'ity, fa samy manana ny azy manokana ny tsirairay amin'izy ireo ary aseho amin'ny zavamaniry samihafa. Manasa antsika handinika amin'ny antsipirihany ny zava-mahadomelina "Bravo", izay anisan'ity vondrona ity, mba hahafantarana ny fomba fiasa sy ny torolàlana ampiasaina.
Fiomanana amin'ny vahaolana miasa
Ny fomba sy ny fotoana fanitsiana, ny fampiasana
Toeram-piarovana sy fihenam-bidy
Mpiara-miasa, fikarakarana, fanodinana
Ny singa fototra mavitrika amin'io fitaovana io dia chlorothalonil, ny votoatiny amin'ny fikarakarana dia 500 g / l. "Bravo" dia manondro pestiside organohlorine. Azo alaina amin'ny endriky ny fampiatoana mifangaro, voahodina amin'ny tavoahangy samihafa amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 litatra.
Ny zava-mahadomelina dia manana tombontsoa maro izay mahatonga azy io ho tsara kokoa raha ampitahaina amin'ny fungicide hafa natao mba hiarovana ny voankazo.
Manakana ny peronosporoz, ny tara matevina ary ny Alternaria amin'ny ovy sy ny vokatra legioma hafa.
Mora ampiasaina mba hiarovana ireo voankazo sy ravina amin'ny aretina isan-karazany.
Ny fahafahana mampiasa amin'ny programa sarotra amin'ny fanaraha-maso ny aretina sy ny bibikely ao amin'ny orinasa miaraka amin'ny fungicides izay an'ny kilasy simika hafa.
Mahomby na dia amin'ny fotoana be loatra aza ny orana sy amin'ny fanondrahana automatique.
Ny fepetra fanatanterahana ny hetsika dia miavaka ho maro an'isa. Ny zava-mahadomelina dia manome fiarovana amin'ny fisorohana ny voankazo avy amin'ny aretina azo avy amin'ny karazana pilina amin'ny fijanonana ny fitomboan'ny sponjy malemy.
Mianara bebe kokoa momba ny fungicides toy ny "Skor", "Ridomil Gold", "Switch", "Ordan", "Merpan", "Teldor", "Folikur", "Fitolavin", "DNOK", "Horus", "Delan" , Glyokladin, Cumulus, Albit, Tilt, Poliram, Antrakol.
Ny hetsika fanaraha-maso dia ahafahan'ny zavamaniry tsy mandany ny heriny amin'ny ady amin'ny aretina, izay mamela ny fambolena hamaka tsara sy hitombo.
Zava-dehibe izany! Ny fihetsika avy amin'ny zava-mahadomelina dia manomboka avy hatrany aorian'ny fitsaboana.
Mba hampiasa araka ny tokony ho izy ny fongana "Bravo", ilaina ny mandinika ireo torolàlana ampiasaina ary mahafantatra ny fomba hanilihana izany. Ny tankan'ny ranomandry dia tokony hokarohina amin'ny fahasimbana sy ny toe-pahasalamana tsara.
Avy eo dia feno tapitrisa feno rano ary betsaka ny sombin-tsolika azo ampiasaina, izay miankina amin'ny kolontsaina izay kasainao hatao.
Ny ranom-boankazo dia feno rano mankany ambony, raha toa ka mihetsika tsy mitsaha-mitombo ilay izy. Ny fitoeran-jiro izay misy ny zava-mahadomelina dia tokony hosasana imbetsaka miaraka amin'ny rano ary ampidirina amin'ny fitambaran-javatra lehibe.
Ny fizorana dia atao amin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny vanin-taona miposaka, raha misy tontolo tsara kokoa ho an'ny fampandrosoana ny areti-mifindra, izany hoe amin'ny vanim-potoanan'ny orana. Ny fihenam-bidy ambony indrindra dia voamarika rehefa ampiharina ara-potoana ny zava-mahadomelina, alohan'ny famafazana ny kolontsaina.
Ny fihenan'ny zava-mahadomelina dia miankina amin'ny kolontsain'ny kolontsaina. Ho an'ny ovy, kôkômbra (eo amin'ny tany malalaka), ny ririnina sy ny lohataona dia mahazo 2.3-3.1 l / ha. Ho an'ny tongolobe sy tomato dia mampiasa 3-3.3 l / ha.
Ny hopitaly koa dia raisina mandritra ny vanin-taona mitombo avo roa heny amin'ny halavany 2,5-4,5 litatra. Ny tahan'ny fitetezana ny fluid miasa dia 300-450 l / ha. Vitsy ny zava-mahadomelina rehetra dia levona amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana na ny aretina, ary mitombo be ny faharesen'ny zavamaniry avy amin'ny holatra.
Zava-dehibe izany! Ny vahaolana miasa dia ampiasaina ankoatra ny andro fiomanana.
Miankina amin'ny tontolon'ny fambolena izay ampiasaina, ny voa nambolena sy ny toetrany, ny fiantraikany amin'ny zava-mahadomelina dia maharitra 1 ka hatramin'ny 3 herinandro. Ny fikarakarana dia tokony averina aorian'ny herinandro 1-2 raha toa ka tsy miverina amin'ny ara-dalàna ny toetr'andro na ny otrikaretina.
Marika 2 kilao amin'ny toaka ho an'ny biby mampinono sy ny fahatelo amin'ny tantely sy ny vorona. Ny fanafody dia tsy ampiasaina ao amin'ny faritra misy rano madio. Ny "Bravo" dia fungicide izay misy chlorothalonil, izay mety hampidi-doza ho an'ny tantely, ka ny faritry ny fahavaratra dia tsy tokony hifanakaiky kokoa mihoatra ny 3 km avy eny an-tsaha.
Mba hanarahana ny fitsipika momba ny tontolo iainana, ny fitotoana dia atao am-piandohan'ny maraina na ny hariva amin'ny hariva, ary ny haavon'ny rivotra dia tsy tokony hihoatra ny 5 km / h, raha hita ireo fitsipika ireo, dia tsy atahorana firy ny tontolo iainana sy ny mponina ao aminy.
Fantatrao ve? Ny fivoarana farany amin'ireo mpahay siansa Japoney dia tena miavaka. Namorona fitaovana iray izy ireo izay tsy mifangaro amin'ny singa simika, fa amin'ny bakteria mifangaro amin'ny ronono.
Mandeha tsara ao anaty ranom-boankazo mifangaro amin'ny fungicide maro sy ny bibikely hafa. Tsy tokony ampiasaina amin'ny herbicides izy io, noho ny tsy fitovian'ny fotoana fitsaboana. Tsy voatery ho ampiasaina miaraka amin'ny hafa mifantoka.
Fantatrao ve? Ireo mpahay siansa mandroso manerana izao tontolo izao dia sahiran-tsaina amin'ny fandrosoana pesticides azo antoka, ary efa nahomby tamin'ny fahombiazana. Noho izany, ohatra, any Japon, ny USA, Alemana ary Frantsa dia mampiasa ny vokatra izay mamoaka gazy karbonika sy rano ao anaty tany.
Mametraha "Bravo" any amin'ny trano fametrahana pesticide manokana, ao anaty fonosana voajanahary efa notaterina mihoatra ny 3 taona, daty famokarana. Ny mari-panaon'ny rivotra ao amin'ny efitrano toy izany dia mety tsy mitovy amin'ny -8 hatramin'ny 35 degre.
Rehefa ampiasaina araka ny torolàlana ampiasaina, araky ny fitsipika momba ny fitrandrahana ala sy ny fampidirana ny fiononoana ara-potoana "Bravo" dia miaro ny fiarovana azo antoka amin'ny aretina maro.
"ASD fraction 2": ny fomba hanomezana akoho
Ny fepetra fototra ilaina amin'ny fikarakarana sansevieroy
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fungicide "Bravo": fampitahana, fomba fampiasana, fampianarana